Google waxay barnaamijka Car Home ku bilaabeysaa Suuqa Android | Androidsis
Google waxay u bilaabeysaa barnaamijka Guriga Gawaarida Suuqa Android
Google ayaa ku dhawaaqday in Gaariga Guriga uu ku laaban doono aaladaha Android Qaabka cusub si aad uhesho lammaane wanaagsan intaad gaariga wado, oo ku siinaya tilmaamaha codka, xiriirada, gps navigation, dhamaantood hal codsi oo waliba laguu habeyn karo sidaad uhesho si ay ugu shaqeyso sidaad rabto.
App wuxuu ku xiraa Bluetooth leedahay a dock gaariga ayaa loo isticmaalaa si aad adiga u hesho gacmo bilaash ah oo samee shaqada GPS-ka oo dhameystiran, laakiin dhib mala noqon doonto maxaa yeelay waad habeyn kartaa aaladda ay ku xirmayso oo sidaas darteed iska ilaali jahwareerka.
Waxa kale oo aad gelin kartaa tuuryo si aad u habeyso iyo gidaarrada ku habboon dhadhankaaga. Maamulaha Wax soosaarka Baabuurta Google Markus Mühlbauer ayaa sheegay in horumariyeyaasha kale ay awood u yeelan doonaan inay barnaamijyadooda wax ka beddelaan si ay si fiican ula shaqeeyaan "habka otomaatiga", oo sidaas darteed maahan inaad joojiso isticmaalka inta ka hartay waxyaabaha aaladdaadu rakibtay.
Gurigan cusub ee Baabuurta ayaa laga heli karayay goobta Suuqa Android dhammaan Android 2.2 taleefannada Froyo, laakiin si lama filaan ah Google ayaa u dhigay kaliya loogu talagalay Nexus One iyo Motorola Droid keenaya cabashooyin nooc kasta leh. Haddii aad isticmaaleyso mid ka mid ah aaladahaan, markaa waad rakibi kartaa adiga oo ka raadinaya Suuqa Android sida Guriga Baabuurta.
En Droid-Life waxay leeyihiin soo dejin in loo isticmaali karaa, sida ay iyaga, qalabka kale ee leh Android 2.2. Anigu iskuma dayin maxaa yeelay weli waxaan haystaa 2.1, laakiin aan aragno haddii aad ku dhiirrato.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Google waxay u bilaabeysaa barnaamijka Guriga Gawaarida Suuqa Android
Waxaa laga yaabaa in cusbooneysiintan kaliya ay ku jirto taleefannada gacanta ee leh heer ahaan, waxaanan u maleynayaa oo keliya Nexus One iyo Motorola Droid inay qaadaan ... maaddaama ay tahay cusbooneysiin, oo aadan cusbooneysiin karin codsi aan ku soo dhicin moobiilka .. .
Waxaan aaminsanahay in HTC Sense iyo mobilada kale ee leh isdhexgalka gaarka ah ay leeyihiin barnaamij gawaari u gaar ah.
Ku jawaab kitkat
qof ayaa og wax la mid ah Galaxy S ??? Waxaan jeclaan lahaa inaan ku kaxeeyo wax walba oo mideysan.
Ku jawaab Diavolo
xiise 501 dijo
Guusha ayaa mar hore la timid codsi aad u la mid ah oo heer ahaan ah, kaliya badmaaxiyaha GPS-ka ee caadiga ah waa Motonav, waxaanan u maleynayaa inaan la beddeli karin
Markaad kuxiraneyso 2.1 rom (geesiga htc oo leh romano rasmi ah "rujin") waxaan helaa fariinta: "khaladka parse": Dhibaato ayaa ka jirtay baaritaanka xirmada.
Google, waad ku mahadsan tahay inaad iska ilowdo 2.1 iyo wixii ka hooseeya isticmaaleyaasha.
kitkat, Car Home v2.0 arjigiisu wuxuu ku jiraa webka inta hartay, kiiskeyga MM 2.1 ayaa rakibey baaritaanka oo si fiican ayuu u shaqeeyaa, kaliya in kiiskeyga gaarka ah aanan u arkin inay waxtar leedahay…. Waxaan hayaa APK aan la wadaago laakiin ma ogi haddii aad ku dhejin kartid xiriiriyeyaasha bogagga kale boggan ...
Hagaag, tan iyo dhamaadka usbuuca dhowr jeer ayaan rakibey oo aan furey hadana wali kuma guuleysan xitaa inaan helo dalabka si aan uga dhex muuqdo launcher-ka ... Waxaan ku riyoodaa Cyanogen 6.0.0 mana siin nooc qalad ah. rakibaadda.
Sidee buu barnaamijkani u socdaa, waxba ma helayo? Oo maxay taasi ku jirtaa gaariga ama qaabka gaariga sida aan ugu aqriyay baraha kale?
Jawaab ku borri
xad -dhaaf dijo
Ma jiraa qof yaqaan barnaamij kale oo A-GPS ah oo loogu talagalay Milestone 2.1 marka laga reebo Motonav ??? Sababta oo ah:
1) waa barnaamij lacag la bixiyo.
2) wuxuu leeyahay khariidado duugoobay.
3) Waan ku halaabay saxsanaanta Garmin iyo OviMaps.
Mawduuc kale ... Wixii war ah ee Garmin ee loogu talagalay Android 2.1?
@overmedia Khariidadaha Google
@ Land-of-Mordor wuxuu ka shaqeeyaa Argentina? Waxaan moodayay inaan wali la awood siin!
Waad salaaman tihiin waxaa jira wax la mid ah bkacberry Waxaan haystaa duufaanka 2 iyo motoroi xm Waan jeclahay arjiga motoroi laakiin waxaan rabaa midabkeyga madow wixii talo bixin ah?
Halkee ayuu ka yimid magaca iyo astaanta Android?